Ciidanka Itoobiya Oo Dad Shacab ah Ku Dilay Degaanka Mooyaale -
HomeWararkaCiidanka Itoobiya Oo Dad Shacab ah Ku Dilay Degaanka Mooyaale
Ciidanka Itoobiya Oo Dad Shacab ah Ku Dilay Degaanka Mooyaale
Ciidanka Dowladda Itoobiya ayaa sagaal qof oo shacab ku dilay magaalada Mooyaale ee u dhaxeysa Sohdinta Itoobiya,Kenya iyo Soomaaliya.
Ciidamada ayaa isku dayay in ay ka hor tagaan koox loo maleeyay in ay ka tirsanyihiin Ururka OLF ee Oromada Itoobiya hayeeshee waxaa ay laayeen dad rayid ah.
Daniel Berhane, oo ah qoraa taageersan Dowladda Itoobiya ayaa sheegay in Ciidamada la siiyay xog qaldan islamarkaana ay toogteen 9 qof iyaga oo dhaawacay 12 kale oo rayid ah.
Taliyaha Milatariga Itoobiya ee Ciidankaas heysta ayaa sheegay in ay iyagu heleen xog la xiriirta in Ururka OLF ay weerar iyaga ka dhan ah ka fulinayaan halkaas sidaasna ku qaadeen howlgalka ay ku dhinteen dadka rayidka ah.
Aschalew Yohannes, oo ah Guddoomiyaha Mooyaale ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xiriira arrintan sida ay ku dhacday islamarkaana ay hay’adaha amaanka kala xisaabtamayaan leynta dadka rayidka ah.
Dalka Itoobiya waxaa uu ku jiraa xaalad deg deg ah waxaana la geliyay markii uu xilka iska casilay ra’isalwasaarihii hore ee dalkaas iyada oo todobaadkan gudahiisa la filayo in dalkaasi uu yeesho Ra’isalwasaare cusub.